မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင် ဒေသခံပြည်သူတချို့သေဆုံးခဲ့ရသလို ဘေးလွတ်ရာ တောတောင်တွေထဲကို တိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ ကရင်ဒေသခံပြည်သူတွေထဲ ကလေးငယ်တွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေပါ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီလိုအသက်လုပြေးနေကြရတဲ့ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အရေးပေါ်ဆေးဝါး ကုသစောင့်ရှောက်မှုတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတယ်လို့ ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ရေး အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က နော်ထူးထူးကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းက မဆုမွန် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
နော်ထူးထူး။ ။ ကျမတို့သတင်းအရဆိုရင် ကလေးငယ် အသက် ၈နှစ်တယောက်သေသွားတယ်ပေါ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေလည်းပြေးလာတယ်။ အသက်ကြီးပိုင်းတွေလည်းပါတယ်။ အားလုံးက ပြေးကြတယ်ပေါ့နော် အစားအသောက်တွေလည်းမပါဘူး။ အဝတ်တထည်ကိုယ်တခုနဲ့ပြေးကြရတာ။ တောထဲမှာနေကြပုန်းကြရတယ်။ တညလုံးပါပဲ။ မနက်ကြမှ အသံတိတ်သွားမှ ဆန်တွေပြန်ယူရတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးနေရတယ်။ အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ဒီနေ့ မတ် ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကျမတို့ရထားတဲ့ စာရင်းအရ ၇ ထောင် ၈ ထောင်လောက်ရှိနေပြီ။ ဖာပွန်ဧရိယာ ။ မူတောမြို့နယ်။ ဒီပွန်မြို့။ တခြားရွာနာမည်တွေ ရွာစုတွေပြေးရတာပဲ။ ခန့်မှန်း ၆ ထောင် ၇ ထောင်လောက်ပေါ့။
မဆုမွန်။ ။ ဒီလောက် ထောင်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ ဒေသခံပြည်သူတွေဖက်က နီးစပ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ပြေးတဲ့အခါမှာလည်း သူတို့အခက်ခဲတွေနေရတယ်သိရပါတယ်။ ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီအနေအထားမှာ လူသားချင်းစာနာတဲ့ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့ ၊ သူတို့ဒီလို စစ်ပြေးလာတဲ့အနေအထားကို လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ဘာတွေများ တောင်းဆိုလိုပါသလဲရှင့်။
နော်ထူးထူး။ ။ ကျမတို့တောင်းဆိုချင်တာက ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခက်ခဲရှိလဲ ကိုဗစ် ကို ကြောက်လို့လားမသိဘူးပေါ့နော်။ စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာက ပြေးလာတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကို သူတို့အနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာပေးပြီးတော့ အကာအကွယ်ခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်။ ပေးဖို့သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပြေးလာသူတွေကို နောက်မနက်မှာ ပြန်လို့ပြောတာဟာ ရက်စက်လွန်းရာရောက်ပါတယ်။ ရွာသားတွေက သူတို့ရွာကိုလည်း မပြန်နိုင်ပါဘူး။ သောင်ရင်းမြစ်ဟိုဖက်ကမ်းမှာပဲ သူတို့မြင်နေရတာပေါ့နော်။ ကျောက်ဖျာတွေရှိတယ်။ အဲဒီကျောက်ဖျာအာက်မှာပဲ ဝင်ပုန်းဖြစ်သလိုနေရပါတယ်။
မဆုမွန်။ ။ ကရင်ပြည်သူတွေ တိမ်းရှောင်ရတဲ့အနေအထားမှာ နာမကျန်းတွေ၊ အသက်ကြီးသူတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကော၊ ကလေးတွေ အများကြီးပါလာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ သူတို့ဘာတွေအခက်ခဲတွေ အရေးတကြီးအကူညီပေးရမှာက ဘာများဖြစ်မလဲရှင့်။
နော်ထူးထူး။.။ အရေးတကြီး သူတို့လိုအပ်တာက အစားသောက်၊ ရာသီဥတု့က ပူတော့ တာလပတ်ပေါ့၊ ချက်ချင်းဝါးနဲ့ အမိုးလုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ပြေးလာတော့ ဆန်တွေလည်း များများစားစားမသယ်နိုင်ဘူး။ တချို့ဆို ဘာမှကို မသယ်နိုင်တာ။ ဆိုတော့ သူတို့အဓိကလိုအပ်တာက ဆန် နဲ့ ကျန်းမာရေးဆေးဝါးလိုတယ်။ ပြေးလာရတာဆိုတော့ ကလေးတွေက ဝမ်းလျော ဝမ်းသွားတာလည်း တွေ့ရတယ်။ တချို့ပြေးရင်း ထိခိုက်လာတာရှိတယ်။ ရှေးဦးသူနာပြုစု့ဖို့ပေါ့နော်။ အဓိက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေါ့နော်။
မဆုမွန်။.၊ နောက်တခုက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တိမ်းရှောင်လာကြရင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိလာတာကို သူတို့အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကကော ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိကြသလဲပေါ့နော်။
နော်ထူးထူး ။. ။ ပြေးရင်းလွှားရင် လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့သူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ ထိုင်းဖက်ကို ညှိနှိုင်းပြီး ပို့ရတယ်ပေါ့နော်။ ၆ ယောက်လောက်ရှိတယ်။ ထိုင်းဖက် မယ်ဟောင်ဆောင် ကိုပို့ကု့ရပါတယ်။ တချို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဟုတ်ပဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ ကေအင်ယူ ရဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနက ဆေးမှူးတွေက ကု့သပေးနေတာတော့ရှိတယ်။
မဆုမွန် ။.။ ကရင်လူထု့ထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း သူတို့နေရပ်ပြန်ရေးမသေချာသေးဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဖက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ ဘာများတောင်းဆိုချင်ပါသလဲ။
နော်ထူးထူး ။. ။ ကျမတို့အနေနဲ့ စစ်ကောင်စီ အာဏာသိမ်းမှ တောင်းဆိုလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်ကတည်းက တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ပြစ်ဒဏ်က လွတ်ကင်းခွင့်တွေရှိနေသမျှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေက ရှိနေခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အရေးယူမှုမရှိတဲ့ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက် လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုက တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာအမြဲရှိခဲ့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာပြည်မှာ အရပ်သားတွေ ဒီလို အကာကွယ်မဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရတာတွေကို စိတ်ပူပါတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေ တိကျတဲ့ အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့အချိန်တန်နေပါပြီ။ လက်နက်ရောင်းချမှုတွေပိတ်ပင်ဖို့ ဖိအားပေးရပါမယ်။ ဒီထက်ပိုလုပ်ဆောင်ဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က နော်ထူးထူးကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းက မဆုမွန် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာစဈတပျရဲ့ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုတှအေတှငျး ကလေးငယျတဦးအပါအဝငျ ဒသေခံပွညျသူတခြို့သဆေုံးခဲ့ရသလို ဘေးလှတျရာ တောတောငျတှထေဲကို တိမျးရှောငျနကွေရတဲ့ ကရငျဒသေခံပွညျသူတှထေဲ ကလေးငယျတှေ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ သကျကွီးရှယျအိုတှနေဲ့ နာမကနျြးဖွဈနသေူတှပေါ ပါဝငျနပေါတယျ။ ဒီလိုအသကျလုပွေးနကွေရတဲ့ စဈပွေး ဒုက်ခသညျတှအေတှကျ စားနပျရိက်ခာနဲ့အရေးပျေါဆေးဝါး ကုသစောငျ့ရှောကျမှုတှေ အရေးတကွီး လိုအပျနတေယျလို့ ကရငျလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့ကပွောပါတယျ။ ကူညီကယျဆယျပေးနိုငျရေး အခကျအခဲတှနေဲ့ရငျဆိုငျနကွေရတဲ့ မတျလ ၃၁ရကျနေ့ နောကျဆုံးအခွအေနကေို ကရငျလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့က နျောထူးထူးကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးက မဆုမှနျ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
နျောထူးထူး။ ။ ကမြတို့သတငျးအရဆိုရငျ ကလေးငယျ အသကျ ၈နှဈတယောကျသသှေားတယျပေါ့။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှလေညျးပွေးလာတယျ။ အသကျကွီးပိုငျးတှလေညျးပါတယျ။ အားလုံးက ပွေးကွတယျပေါ့နျော အစားအသောကျတှလေညျးမပါဘူး။ အဝတျတထညျကိုယျတခုနဲ့ပွေးကွရတာ။ တောထဲမှာနကွေပုနျးကွရတယျ။ တညလုံးပါပဲ။ မနကျကွမှ အသံတိတျသှားမှ ဆနျတှပွေနျယူရတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးနရေတယျ။ အခွအေနကေ တျောတျောဆိုးပါတယျ။ ဒီနေ့ မတျ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ ကမြတို့ရထားတဲ့ စာရငျးအရ ၇ ထောငျ ၈ ထောငျလောကျရှိနပွေီ။ ဖာပှနျဧရိယာ ။ မူတောမွို့နယျ။ ဒီပှနျမွို့။ တခွားရှာနာမညျတှေ ရှာစုတှပွေေးရတာပဲ။ ခနျ့မှနျး ၆ ထောငျ ၇ ထောငျလောကျပေါ့။
မဆုမှနျ။ ။ ဒီလောကျ ထောငျနဲ့ခြီတိမျးရှောငျနရေတဲ့ ရှာသူရှာသားတှေ ဒသေခံပွညျသူတှဖေကျက နီးစပျတဲ့ထိုငျးနိုငျငံဖကျပွေးတဲ့အခါမှာလညျး သူတို့အခကျခဲတှနေရေတယျသိရပါတယျ။ ကရငျလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့အနနေဲ့ ဒီအနအေထားမှာ လူသားခငျြးစာနာတဲ့ စောငျ့ရှောကျပေးနိုငျဖို့ ၊ သူတို့ဒီလို စဈပွေးလာတဲ့အနအေထားကို လုပျပေးနိုငျဖို့ ဘာတှမြေား တောငျးဆိုလိုပါသလဲရှငျ့။
နျောထူးထူး။ ။ ကမြတို့တောငျးဆိုခငျြတာက ထိုငျးအစိုးရအနနေဲ့ ဘယျလိုအခကျခဲရှိလဲ ကိုဗဈ ကို ကွောကျလို့လားမသိဘူးပေါ့နျော။ စဈပှဲဖွဈတဲ့နရောက ပွေးလာတဲ့ ကရငျတိုငျးရငျးသားတှကေို သူတို့အနနေဲ့ လူသားခငျြးစာနာပေးပွီးတော့ အကာအကှယျခိုလှုံခှငျ့ပေးဖို့ပေါ့နျော။ ပေးဖို့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ပွေးလာသူတှကေို နောကျမနကျမှာ ပွနျလို့ပွောတာဟာ ရကျစကျလှနျးရာရောကျပါတယျ။ ရှာသားတှကေ သူတို့ရှာကိုလညျး မပွနျနိုငျပါဘူး။ သောငျရငျးမွဈဟိုဖကျကမျးမှာပဲ သူတို့မွငျနရေတာပေါ့နျော။ ကြောကျဖြာတှရှေိတယျ။ အဲဒီကြောကျဖြာအာကျမှာပဲ ဝငျပုနျးဖွဈသလိုနရေပါတယျ။
မဆုမှနျ။ ။ ကရငျပွညျသူတှေ တိမျးရှောငျရတဲ့အနအေထားမှာ နာမကနျြးတှေ၊ အသကျကွီးသူတှေ၊ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှကေော၊ ကလေးတှေ အမြားကွီးပါလာနိုငျတဲ့အနအေထားမှာရှိတော့ သူတို့ဘာတှအေခကျခဲတှေ အရေးတကွီးအကူညီပေးရမှာက ဘာမြားဖွဈမလဲရှငျ့။
နျောထူးထူး။. ။ အရေးတကွီး သူတို့လိုအပျတာက အစားသောကျ၊ ရာသီဥတု့က ပူတော့ တာလပတျပေါ့၊ ခကျြခငျြးဝါးနဲ့ အမိုးလုပျနိုငျတယျ။ သူတို့ပွေးလာတော့ ဆနျတှလေညျး မြားမြားစားစားမသယျနိုငျဘူး။ တခြို့ဆို ဘာမှကို မသယျနိုငျတာ။ ဆိုတော့ သူတို့အဓိကလိုအပျတာက ဆနျ နဲ့ ကနျြးမာရေးဆေးဝါးလိုတယျ။ ပွေးလာရတာဆိုတော့ ကလေးတှကေ ဝမျးလြော ဝမျးသှားတာလညျး တှရေ့တယျ။ တခြို့ပွေးရငျး ထိခိုကျလာတာရှိတယျ။ ရှေးဦးသူနာပွုစု့ဖို့ပေါ့နျော။ အဓိက ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပေါ့နျော။
မဆုမှနျ။. ၊ နောကျတခုက လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ တိမျးရှောငျလာကွရငျ ထိခိုကျဒဏျရာရမှုတှရှေိလာတာကို သူတို့အတှကျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတှကေကော ဘယျလိုမြိုးအခကျအခဲတှရှေိကွသလဲပေါ့နျော။
နျောထူးထူး ။. ။ ပွေးရငျးလှားရငျ လကွေောငျးက တိုကျခိုကျတာခံရတဲ့သူတှေ ထိခိုကျဒဏျရာရသူတှကေိုတော့ ထိုငျးဖကျကို ညှိနှိုငျးပွီး ပို့ရတယျပေါ့နျော။ ၆ ယောကျလောကျရှိတယျ။ ထိုငျးဖကျ မယျဟောငျဆောငျ ကိုပို့ကု့ရပါတယျ။ တခြို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဟုတျပဲ ထိခိုကျဒဏျရာရသူတှကေိုတော့ ကအေငျယူ ရဲ့ ကနျြးမာရေးဌာနက ဆေးမှူးတှကေ ကု့သပေးနတောတော့ရှိတယျ။
မဆုမှနျ ။. ။ ကရငျလူထု့ထောငျနဲ့ခြီထှကျပွေးနရေတယျ။ အခုခြိနျထိလညျး သူတို့နရေပျပွနျရေးမသခြောသေးဘူး။ ဒီအပျေါမှာ ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးဖကျက မွနျမာနိုငျငံမှာ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှရှေိနတေဲ့အပျေါ ကရငျလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့အနနေဲ့ ဘာမြားတောငျးဆိုခငျြပါသလဲ။
နျောထူးထူး ။. ။ ကမြတို့အနနေဲ့ စဈကောငျစီ အာဏာသိမျးမှ တောငျးဆိုလာတာမဟုတျပါဘူး။ ဟိုးအရငျကတညျးက တောငျးဆိုခဲ့တာပါ။ ပွဈဒဏျက လှတျကငျးခှငျ့တှရှေိနသေမြှ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေ ရှိနခေဲ့တယျ။ နောကျပွီးတော့ အရေးယူမှုမရှိတဲ့ တာဝနျခံမှု တာဝနျယူမှုမရှိတဲ့အတှကျ လူအခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုက တိုငျးရငျးသားနယျမွမှောအမွဲရှိခဲ့တယျ။ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီမှာ မွနျမာပွညျမှာ အရပျသားတှေ ဒီလို အကာကှယျမဲ့ သတျဖွတျခွငျးခံနရေတာတှကေို စိတျပူပါတယျဆိုတဲ့အဆငျ့ကနေ တိကတြဲ့ အရေးယူမှုတှလေုပျဖို့အခြိနျတနျနပေါပွီ။ လကျနကျရောငျးခမြှုတှပေိတျပငျဖို့ ဖိအားပေးရပါမယျ။ ဒီထကျပိုလုပျဆောငျဖို့ တောငျးဆိုခငျြပါတယျ။
ကရငျလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့က နျောထူးထူးကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးက မဆုမှနျ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။